သက်ဝေ: ၂၀၀၉ မှတ်တမ်း
Thant November 26, 2009 at 5:25 PM
ဆက်လက်၍ တိုက်ပွဲဝင်ကြပါစို့…... :))))
မသက်ဝေရဲ့ ဆုတောင်းတွေအားလုံး ပြည့်စုံပါစေ...
Nge Naing November 26, 2009 at 6:54 PM
"ထိုဘလော့ဂ်လေးကြောင့် ချစ်ခင်စရာ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေ အသစ်များ များစွာရခဲ့သည်။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မမြင်ဖူးကြသော်လည်း အနှစ်နှစ် အလလက ခင်မင်ခဲ့သူများပမာ ရင်းနှီးခင်မင် သံယောဇဉ်တွယ်ကြသည်။ "
အဲဒါတော့အမှန်ပဲ ကျွန်မဘလော့ဂ်သက်တမ်း ၄ လပဲ ရှိသေးတယ်။ ကျွန်မလည်း သက်ဝေလိုပဲ ခံစားရတယ်။ ဘလော့ဂ်ကို ၀ါသနာအရ ရေးရတာ ဖြစ်လို့ ဘလော့ဂ်လည်လို့ ရေးလို့ ကုန်သွားတဲ့အချိန်တွေကို နှမြောတယ်ဆိုတာ တခါမှ မခံစားဖူးဘူး။ ပျော်ရွှင်စွာ ဘလော့ဂ်ဆက်ရေးနိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်နော့်။
Anonymous November 26, 2009 at 7:25 PM
တီဝေ့ဆီ စရောက်တာကတော့ ကြာလှပါပြီ။ နောက်ပိုင်းမှ အလာစိပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် ။ အဲ့လိုခေါ်လို့ စိတ်မဆိုးကြေး။ နှုတ်ကျိုးနေ၏။
လူဆိုး၊ လူအေး၊ ဂျိုကာ၊ အစက်ကလေး ဆိုသူများကို
သိချင်နေမိ၏။ ဒီဇင်ဘာတွင် တွေ့ဆုံချင်ပါသည်။
၀င်းဇော် November 26, 2009 at 7:28 PM
၂၀၁၀ ပြက္ခဒိန်လေး ယူသွားပါတယ်
Rita November 26, 2009 at 9:50 PM
ဂျူလိုင်ဒွင်း၊ ရွာသားနဲ့ သီဟသစ် မဟုတ်လား။
pandora November 26, 2009 at 10:14 PM
သူများအတွက်ကတော့ အလုပ်တွေများလို့ အလုပ်အကြွေးတွေကို နောင်နှစ်ခါအထိ သယ်သွားဖြစ်မယ့် ၂၀၀၉ လား မသိပါဘူး...
စိတ်ရှိတိုင်း ဆက်ရေးနိုင်ပါစေ :)
Anonymous November 26, 2009 at 11:37 PM
အစဉ်ရင်းနှီးချစ်ခင်နေမယ့် အဲဒီထဲမှာ. "များ"ရောပါလာဟင်။
ရွှေပြည်သူ November 27, 2009 at 2:12 AM
အစ်မသက်ဝေရဲ့ ၂၀၀၉ မှတ်တမ်းက သိပ်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတာပဲး) ညီမလည်း P.S I love you ကို သိပ်သဘောကျတာပဲ။ ညီမက ရုပ်ရှင်ပဲ ကြည့်လိုက်ရတာ။ Singapore Idol မှာ တရုတ်တွေကို အားပေးချင်တာချင်းလည်း တူတယ် အစ်မး) မလေးတွေက သူတို့ အချင်းချင်း Vote လုပ်တာများလို့ နိုင်ကြတာလို့ ကြားဖူးပါတယ်။ ၂၀၁၀ ပြက္ခဒိန်အတွက်လည်း ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်... ညီမလည်း ပိတ်ရက်တွေကို တန်ဖိုးထား မြတ်နိုးတတ်လို့ပါး))
mae November 27, 2009 at 2:35 AM
ဟုတ်တယ်နော်.. ဗေဒင်တွေထဲမှာတော့ အပြောင်းအလဲ ဘာညာနဲ့၊ တကယ်ကျတော့လဲ ဖြတ်သန်းသွားလိုက်ရင် ဒီလိုပဲ ပြီးသွားတာပါပဲ၊
sylvester ကုိုရော Jonathan ကိုရော vote ပေးဖူးတယ်၊ အိမ်က မေမေတောင် ပါတယ်၊ ရလဲမရဘူး
နောက်ကြည့်မှန် ဖတ်ချင်လိုက်တာ.. PS I love you တော့ ဖတ်ဖူးတယ်..
window7တော့ မတတ်နိုင်လို့ မလဲထားဘူး၊
ချစ်ခင်တဲ့သူတွေ ရုတ်တရက် ဆုံးရင် တော်တော်သောကရောက်ရတယ်နော်.. သိပ်ချစ်တဲ့ အဒေါ်ချက်ချင်းကြီးလို ဆုံးတော့ တော်တော်နဲ့ ဖြေမရခဲ့ဘူး၊
facebook pet society က သမီးနဲ့ သားတော့ ပစ်ထားတာ ကြာပေါ့.. သနားပါတယ်၊ ကလေးတွေ... မအားတာနဲ့ မလှည့်မိဘူး
IC show ကို ပိုက်ဆံအိတ်တစ်အိတ်နဲ့ လဲတယ်တဲ့လား? သဘောကျလိုက်တာ၊ မေဆိုရင်တော့ ခရီးတစ်ခု နဲ့ လဲမိမယ်ထင်တယ်၊
မမသက်ဝေရေ..အမြဲခင်နိုင်ပါစေ၊ အိမ်ပြန်ရောက်တုန်းက မမ ချက်ကျွေးမယ်ဆိုတဲ့ အစားတွေ မြည်းဖို့ အခွင့်မရလိုက်ဘူး.. နောက်နှစ်ပေါ့ အဟိ
ကိုလူထွေး November 27, 2009 at 3:10 AM
Hmoo November 27, 2009 at 5:33 AM
No war,No fight. / love ,peace & joy :)
Let me stay in ur blog & participate @ 2010 .
Moe Cho Thinn November 27, 2009 at 6:46 AM
ဖတ်ရတာကို ပျော်မိတယ်။ ဘ၀ကို အဲဒီလိုပဲ အမြဲ ဖြတ်သန်းသွားရရင် ကောင်းမယ်နော်။ မမကိုလဲ နောင် တိုးပြီး ခင်ပါရစေ။
rose of sharon November 27, 2009 at 7:04 PM
ဒီပို့စ်လေးကိုဖတ်ရင်းတွေးစရာရသွားတယ်... တစ်နှစ်အတွင်း ကြုံခဲ့ရတဲ့ အကျိုးအကြောင်း အဆိုးအကောင်းတွေက ချရေးရရင် အများကြီးဘဲနော်....
ချစ်ကြည်အေး November 27, 2009 at 8:14 PM
တနှစ်တာ...။ တခုခု အပြောင်းအလဲဖြစ်ဖို့ လုံလောက်အောင် ကြာရှည်သလို...မျက်တောင်လေးတခတ်လို့ ပြောလို့ရအောင်လဲပဲ တိုတောင်းမြန်ဆန်လွန်းလှချည်ရဲ့...။ ဟမ်...ငါသာဆို အိုင်စီရှိုးကို ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ လဲနှိုင်ဘူး...
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူငယ်ချင်းလေးအတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ် ၂၀၁၀ ဖြစ်စေဖို့ ကြိုတင် ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါရဲ့......။
khin oo may November 28, 2009 at 12:26 AM
ခင်မင်းဇော် November 28, 2009 at 1:26 AM
ခုန မန့်လိုက်တဲ့အရှည်ကြီးပျောက်သွားတယ် ဘယ်လိုဖြစ်လဲ မသိ။
ခင်မင်းဇော် November 28, 2009 at 1:28 AM
ဒီပို့စ်ဖတ်မိတော့ ၀မ်းနည်းသလို ခံစားရတယ် ။
အမကတော့ ဘလော့ကို ဘယ်တော့မှ နှုတ်ဆက်မိမယ်မထင်ပါ။ ဒီဘလော့ကနေ တဆင့်ခင်မင်ရတဲ့ ညီမတွေကို အပြင်က မိတ်ဆွေတွေလိုပဲ တန်ဖိုးထားပြီး နှစ်နှစ်ကာကာ ခင်မင်မိပါတယ်။ ပျော်ရွှင်ပါစေ သက်ဝေ ညီမရေ...
khin oo may November 28, 2009 at 6:54 AM
nu-san November 28, 2009 at 10:13 AM
မမရဲ့ ၂၀၀၉ မှတ်တမ်းကို ဖတ်ကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဒီနှစ်ကို ဘယ်လို ကုန်ခဲ့ပါလိမ့်လို့ ပြန်တွေးမိတယ်...
အမရေ...စင်ကာပူလာလည်ဖြစ်ရင်တော့ မမတို့နဲ့ တကယ်ဆုံချင်ပါတယ်...
ကျနော့်ရဲ့ ၂၀၁၀ ကတော့ သိတဲ့အတိုင်းပဲ.. ကလေးတဖက်နဲ့ ကသောင်းကနင်းပြီးသွားမှာ မြင်ယောင်မိနေသေးတယ်.. :D
သက်ဝေ November 28, 2009 at 11:10 PM
ရေးတုန်းကတော့ ၂၀၀၉ မှတ်တမ်းပါ...။
ရေးရင်းနဲ့ အရှိန်တွေရပြီး လောလောဆယ် အကြောင်းတွေပါ ရောပါကုန်တယ်၊ ပိုစ့်ကို တင်ပြီးခါမှ တချို့စာပိုဒ်တွေ ပြန်ဖြုတ်ချင်စိတ်ပေါ်လာတယ်...။ ဒါပေမယ့် ဖြုတ်ပစ်ရမှာကျတော့လဲ နှမြောနေတာနဲ့ ဒီတိုင်းပဲ ထားလိုက်တော့တယ်...။
အလွန် ရှည်လျား ထွေပြားသော ပိုစ့်တခုကို စိတ်ရှည် သည်းခံပြီး ဖတ်ပေးသွားကြတဲ့ သန့်ကလေး၊ မငယ်နိုင်၊ Craton ၊ ကိုဝင်းဇော်၊ ညီမ ရီတာ၊ ပန်ပန်၊ မွန် ၊ ရွေပြည်သူ၊ မေ၊ ကိုလူထွေး၊ Hmoo ၊ ညီမ ချိုသင်း နဲ့ Rose၊ သူငယ်ချင်း ချစ်ကြည်အေး၊ မမခင်ဦးမေ၊ အမ ခင်မင်းဇော် နဲ့ ညီမငယ် နုစံ တို့ရဲ့ မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူး အများကြီး အများကြီးတင်ပါတယ်...။
puluque November 29, 2009 at 11:56 AM
မမရဲ့ window764bit မှာ ဒီဖေဇော်ဂျီကို စမ်းကြည့်ပါ အဆင်ပြေမလားမသိဘူး။ သူက ဗစ်စတာ ၆၄မှာတော့ အဆင်ပြေတယ်ပြောပါတယ်ခင်ဗျ
myo November 29, 2009 at 11:17 PM
၂၀၁၀ ကျရင်လည်း အရာရာအားလုံးအဆင်ပြေပါစေ..
IC show ကိုလည်း ဘာနဲ့မှမလည်းရပဲ ကြည့်နိုင်ပါစေ..
ရေးချင်နေတဲ့ ကဗျာတွေလည်း ရေးထွက်နိုင်ပါစေ..
အမ သက်ဝေ လက်ရေးဗေဒင် ဟောလို့ရပြီ။ မှန်တယ် ဟီးး စိတ်မြန်လက်မြန် အဆင့်ကနေ ပြီးပြီးရော လုပ်တဲ့ အဆင့်မရောက်အောင် သတိထား ထိန်းနေပါတယ် မမ
ကြည် November 30, 2009 at 3:40 PM
ကိုယ်ချစ်ခင်နှစ်သက်တဲ့ ဘလောဂ်ဂါ တွေကို ကန်လန့်ကာနောက်ကွယ်ကနေ ခင်မင်တန်ဖိုးထားနေတဲ့ သူဟာကိုယ်ပါ။